सुवास थापाले धुम्रपान त्यागे ! « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
सुवास थापाले धुम्रपान त्यागे !
‘बिर्खे’ अभिनेता तथा निर्माता सुवास थापाले धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन त्यागेका छन् । आइतवार पोखरामा सुवासले अव देखी धुम्रपान तथा सुतीजन्य पदार्थ त्यागेको ब्यहोराको ब्यानरमा हस्ताक्षर समेत गरे ।
यद्मपी उनले फिल्मको दृश्यमा धुम्रपान गर्न सक्ने अवस्थालाई भने जिवीतै राखेका छन् । प्रसङ्ग हो, राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसरमा पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रमको । पोखराको मुस्कान क्लवले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथी थिए ‍’बिर्खे’ अर्थात सुवास थापा । सो क्लवको पहलमा पोखरा उप महानगरपालिकाको वडा नं १३ को केही क्षेत्रलाई खुल्ला धुम्रपान निशेधित क्षेत्र घोषणा गरीएको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै सुवासले उपस्थित करीब ४ सय बालबालिकालाई कुलतमा नफस्न आग्रह गरे । अनि धुम्रपान निषेधित क्षेत्र घोषणा गरीएको ब्यानरमा हस्ताक्षर समेत गरे । दोस्रो हप्तामा प्रदर्शनरत चलचित्र ‘बिर्खेलाई चिन्छस्’ का अभिनेता तथा निर्माता सुवासलाई हेर्न पोखरा मियापाटनका स्कुले बालबालिकाहरुको ताती नै लाग्यो । सोही कार्यक्रममा सुवासले आफ्नो फिल्मको बारेमा बालबालिकाको प्रतिक्रिया समेत लिन भ्याए । उनले बालबालिकालाई भने – “तपाईहरु बिर्खे जस्तो हुनु हुन्न है, राम्ररी पढ्नु पर्छ ।”
‘को आफ्नो’ फिल्मको सुटिङलाई पोखरा आएका सुवासले आइतबार नै पोखराको बाराही सिनेमा हलमा दर्शकसंग बसेर आफ्नो फिल्म ‘बिर्खेलाई चिन्छस’ हेर्न समेत भ्याए । “पोखराका दर्शकले दिएको प्रतिक्रियाले उत्साहीत बनाएको छ” सुवासले भने – “दोस्रो हप्तामा पनि पोखरामा यति धेरै दर्शक फिल्म हेर्न आउनुभएको छ, फिल्म निर्माणमा सफल भएको अनुभुति भैरहेको छ । ” भाद्र २० बाट प्रदर्शनमा आएको ‘बिर्खेलाई चिन्छस’ ले पोखराको बारहीबाट मात्रै आइतवारसम्म करीब चार लाख ग्रस कलेक्सन गरेको हल स्रोतको जानकारी छ ।
पोखरामा प्रदर्शनरत ‘कोहीनुर’ र यो शुक्रबारे फिल्म ‘निशानी’ संग ‘बिर्खे’ ले प्रतिषपर्धा गरीरहेको छ ।